Demographics nke Martech Zone | Martech Zone
Saturday, April 10, 2010 Satọde, 27 Juun 2015 Douglas Karr
O nwere ike ịbụ na ị chọpụtala na anyị na-agba ọsọ Igwe mmadụ nyocha na blog nwa oge ugbu a. Enwere m olileanya na ị wepụtara oge iji zaa nyocha ndị ahụ - nsonaazụ ya dị oke mma. Lee ụfọdụ ihe:
62.5% nke ndị na-agụ akwụkwọ bụ ụmụ akwụkwọ kọleji, 21.9% nwere gụsịrị akwụkwọ
51.6% nke ndị na-agụ akwụkwọ bụ were oge niile, 32.3% bụ n'arụrụ onwe.
Imirikiti ndị na-agụ akwụkwọ bụ ndị na-eme mkpebi ma ọ bụ nwee mmetụta:
Ndị na-agụ akwụkwọ si ụlọ ọrụ nha niile:
Imirikiti ndị na-agụ akwụkwọ bụ ndị isi ma ọ bụ ndị isi nke ụlọ ọrụ ha.
Imirikiti ndị na-agụ akwụkwọ nọ na 34 ruo 44 dị afọ.
56.3% nke ndị na-agụ akwụkwọ nwere a ele ihe anya na onodu aku na uba.
Ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ na-eme ihe karịrị $ 75k, ya na otutu elu $ 150k.
Ọtụtụ ndị na-agụ ya na-eji Internetntanetị ihe karịrị awa 24 kwa izu, na otu ụzọ n'ụzọ atọ karịrị awa 36 kwa izu.
Ikekwe ihe na-adọrọ mmasị bụ ụfọdụ echiche maka ịzụ ahịa azụmaahịa - ihe karịrị ọkara ndị na-agụ akwụkwọ kwuru na ha nwere mmasị na-amalite ahia nke ha na / ma ọ bụ ịgbanwe ọrụ na ọrụ. Dị ka serial entrepreneur (aka - a Ihọd na hụrụ n'anya ibiaghachi si otu ihe ịma aka nke ọzọ), nke a bụ na-adọrọ mmasị m. N'ime oge, ọ ga-atụ aro na m na-adọta ndị na-agụ akwụkwọ nwere ụdị echiche ahụ na blọgụ ahụ.
Ọnụọgụ ndị a bụ ebe m ga-achọ ka blog bụrụ ihe metụtara mmetụta na ịba uru!
Tags: ihe ngosinkọwapụta
Jiri Google Apps kwalite azụmahịa gị
Apr 10, 2010 na 11: 36 AM
Mmasị na ekele maka ịkekọrịta ozi na ngwaọrụ ahụ! Data maka onye data!
Ekele na ekele kacha mma,